Onye na-eweta ihe mkpuchi Laser ntụkwasị obi gị, ngwọta Laser ọkachamara
Nkwekọrịta ihe nlegharị anya
Mee ka mmepụta Sublimation dị mfe
Ọnọdụ ziri ezi
Ngwa Ebipụtara gị
R&D maka Cordura
Nnukwu Ọkpụkpọ Laser Cutter
N'ime 3.2 mita n'obosara
Emepụtara maka akpaaka
Ọdịnihu nke ịcha laser
MimoWork bụ ọkachamara n'ichepụta ihe ngwọta laser maka nhazi ihe na-abụghị metal n'ọhịa nke mgbasa ozi, ụgbọ ala & ụgbọ elu, ejiji & uwe, mbipụta dijitalụ, ụlọ ọrụ akwa akwa, wdg.
Anyị na-enye ahaziri na pụrụ iche laser ọnwụ igwe maka iche nke chọrọ ebuli anyị ahịa 'ọrụ na mmepụta.
Ụzọ kachasị mfe ịkpụ maka ngwaahịa sublimation agba.
Nchọpụta ihe ngụsị akwụkwọ ziri ezi yana igbutu ihe nhịahụ maka ụkpụrụ & udi ọ bụla.
Ịrụ ọrụ dị elu na nnukwu akpaaka maka inye nri, ịse foto na ịcha ihe.
Ọkachamara nke ịkpụ ihe na-agbanwe agbanwe.
Contour-Laser-Cutter-Ekpuchiri nke ọma
Enwere ike ịmata mgbagha ma ọ bụ gbatịa ọ bụla site na Sistemụ Nghọta Mimo Contour na a ga-egbutu iberibe akwụkwọ ebipụtara n'ogo na ọdịdị ziri ezi.
Nhazi ahụ zuru oke na-ekpebi nkwa nchekwa na ịkpụpụta mmepụta
Ejikọtara ya na oke ọsọ ọsọ, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, na njirimara ruru eru, nhazi usoro ọ bụla.
Igwe ntinye ọkwa kachasị mma maka nnukwu usoro ihe siri ike.
R&D maka nhazi acrylic na osisi.
Na-enye ohere mbupu & ibu na-enweghị mgbochi.
Nnukwu ọsọ na nkenke ịkpụ.
Nhọrọ na-enweghị atụ maka ịkpụ ihe na-agbanwe agbanwe.
Isi laser abụọ na-akpụ akpụ n'onwe ha, rụọ ọrụ gị okpukpu abụọ (nhọrọ).
Ngwa Nesting na-echekwa ihe gị n'ọkwa kacha ukwuu.
Na-aga n'ihu na-egbutu nri na akpaaka.
Onye na-ahụ maka Laser Flatbed 250L
Ezigbo maka ịcha akwa akwa.
Ọrụ dị ike na-emepụta mgbanwe na-adịghị agwụ agwụ.
Teknụzụ mbipụta ink-jet na-enweghị kọntaktị (nhọrọ).
Nnukwu tebụl ọrụ nwere ike ịhazi ya.
Kwesịrị ekwesị maka akara ma ọ bụ nsusu ọnụ-ịcha ihe na-abụghị metal workpieces dị ka ihe nkiri mbufe okpomọkụ.
3D Dynamic mgbado anya na-agbaji oke ihe.
Akara laser na-efe efe iji wuo ahịrị mgbakọ (nhọrọ).
Ndụmọdụ tupu ire ere dị mkpa iji mụta maka ụfọdụ mkpa gị.Nke dabara gị kacha mma!
Igwe laser MimoWork na-ekpuchi ihe dị iche iche chọrọ site na mpaghara dị iche iche.
Nhọrọ laser mgbakwunye na multifunctional dị maka ụdị dị iche iche nke chọrọ ahaziri iche.
Ọrụ MimoWork na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ na arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke igwe laser anyị ka ndị ahịa anyị na-enwe mmetụta pụrụ iche mgbe niile.
Ndị otu MimoWork na-etinye mkpa ndị ahịa anyị karịa nke anyị site na mbido nnwale ihe mbụ ruo na mmalite nke sistemụ laser.
Ruo afọ 20, MimoWork raara onwe ya nye ịkwanye
ókè nke teknụzụ laser na azụmahịa ọhụrụ
Oche ụgbọ ala
Lelee ngwa niile
Ịcha ihe nkedo na MimoWork
Akụkọ | Mee-18-2022
Laser Cut Patch Style Uwe gị na Ejiji na Laser Cut Patches Enwere ike iji ya na ihe ọ bụla ị na-achọ ịhụ, gụnyere jeans, uwe elu, t-shirts, sweatshirts, akpụkpọ ụkwụ, akpa azụ na ọbụna mkpuchi ekwentị.Ha...
Mee ya ozugbo site na Laser PCB osise
Akụkọ | Mee-11-2022
Mee ya ozugbo site na Laser PCB Etching PCB, onye na-ebu ntọala nke IC (Integrated Circuit), na-eji akara njikwa iji ruo njikọ sekit n'etiti ngwa eletrọnịkị.Gịnị mere o ji bụrụ kaadị sekit e biri ebi?condu...
Akụkọ | Mar-10-2022
Kedu ihe na-eme ka onye na-ese ihe dị iche na onye na-ese laser? Kedu ka esi ahọrọ igwe laser maka ịkpụ na ihe osise? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị dị otú ahụ, eleghị anya ị na-atụle itinye ego na laser ...
Usoro nkpuchi friza maka Sistemụ Laser CO2 n'oge oyi
Akụkọ | Nov-01-2021
Nchịkọta: Isiokwu a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu mkpa nke laser ọnwụ igwe oyi mmezi, bụ isi ụkpụrụ na ụzọ nke mmezi, otú họrọ antifreeze nke laser ọnwụ igwe, na ihe ndị chọrọ ...
Chọpụta teknụzụ Laser na MimoWork
ị chọrọ ịmatakwu gbasara ọkụ ọgbara ọhụrụ?
Mgbe ahụ denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị.
Akpụkpọ anụ (textile)
©Copyright - 2010-2021 : Ikike niile echekwabara. , , , , , , ,